Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 18)
Ekwentị mbụ nke Xiaomi na gam akporo Go ga-abata na Machị. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ wepụta ekwentị izizi ya na ụdị sistemụ arụmọrụ a.
Meizu M6S nke nwere 4 na 6GB nke RAM nwetara asambodo site na TENAA
Firmlọ ọrụ Meizu nke China ka kwadoro Meizu M6S na 4 na 6GB nke ebe nchekwa RAM na TENAA. Nke a emeela n'oge na-adịbeghị anya, ya mere, anyị ga-ahụ ha na katalọgụ ndị nrụpụta n'oge na-adịghị anya, mana ha nwere otu njirimara na nkọwa nke 6GB RAM M3S malitere na Jenụwarị nke afọ a.
Facebook agaghị ewepu mgbasa ozi site na mgbidi ndị ọrụ
Facebook hapụ atụmatụ iji mepụta ndepụta abụọ dị iche iche. Chọpụta karịa gbasara nnwale dara ada nke netwọkụ mmekọrịta na atụmatụ ha iji mepụta faili ntanetị dị iche.
Dabere na DisplayMate, ihuenyo nke Galaxy S9 kacha mma na ahịa
Dabere na ụlọ ọrụ DisplayMate, onye na-ahụ maka nyocha niile nyocha, ụdị ọ bụla, nke ruru ahịa ahụ, Galaxy S9 bụ nke kachasị mma na ahịa taa, karịa nke iPhone X, nke ruo ugbu a kacha mma. .
Samsung gosipụtara ikike nke smartphones atọ ga-eme n'ọdịnihu
Samsung patents atọ futuristic smartphone aghụghọ. Chọpụta ihe banyere ikike ndị a nke akara Korea nke dọtara mmasị dị ukwuu.
Wepu nkọwa, ọnụahịa na imewe nke Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite: Nkọwapụta, ọnụahịa na imewe leaked. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ site na akara ndị China nke a ga-ewepụta na ọnwa a.
Ozi niile anyị ga - ahụ na Google I / O 2018
Ekpughewo ozi ọma anyị ga-ahụ na Google I / O 2018. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke mmemme a ma ama ga-eme na Mee.
Xiaomi Mi Mix 2S na Mi 7 ga-enwe ihuenyo OLED 6.01 nke anụ ọhịa si Samsung
Xiaomi Mi Mix 2S na Mi 7, dị ka asịrị ndị kachasị ọhụrụ na-eme, ga-abịa na Samsung OLED ihuenyo 6.01-inch. Emepụtara nke a n'oge na-adịbeghị anya, mana ụlọ ọrụ China akwadoghị ya. Anyị na-agbasawanye gị!
Huawei sonyekwara na gam akporo Go mmemme
Huawei ga-ebido igwe na gam akporo Go. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ China nke ga-ebido igwe nwere ụdị nke gam akporo afọ a.
DOOGEE V: Ngosipụta dị elu na MWC 2018. Chọpụta ihe banyere ngosi nke ekwentị ika na mmemme a ma ama.
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite: Nkọwapụta mmalite ahịa. Choputa ihe banyere igwe ekwenti gosiputara na MWC 2018.
Wiko Tommy 3, Lenny 5 na Jerry 3: Ndabere nke ika ahụ na gam akporo Go
Wiko Tommy 3, Lenny 5 na Jerry 3: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị atọ dị ala site na akara French.
Snapdragon 700: Amamịghe echiche rutere ọnụ ala smartphones
Snapdragon 700: Amamịghe echiche rutere ọnụ ala smartphones. Chọpụta ihe banyere ụdị ụlọ ọhụụ nke ika ahụ.
Hoox K31: mobile kachasị dị nchebe maka ụlọ ọrụ ndị ewepụtara na MWC
Hoox K31: Ekwentị kachasị maka ụlọ ọrụ ewepụtara na MWC. Chọpụta ihe banyere ekwentị a kacha echekwala na mmemme a ma ama.
E gosipụtara MediaTek P60 na MWC18
Emeela MediaTek P60 na Mobile World Congress na Barcelona nke na-eme ebe ọ bụ na February 25. Firmlọ ọrụ Taiwanese na-eme ka o doo anya dị ka ihe nhazi kachasị ngwa ngwa na nke ọma na usoro P, ọ ga-adịkwa site na nkeji nke abụọ nke afọ a. Anyị na-agwa gị ihe niile banyere ya!
Chọpụta ọhụụ ọhụrụ nke Sony gosipụtara na MWC, Sony Xperia XZ2 na otu ụdị dị ike ma dịkwa obere, nke Sony Xperia XZ2 Compact.
Leagoo, otu n’ime ụlọ ọrụ ndị Eshia nke na-anọchi anya ọnwa ndị na-adịbeghị anya, nwere ọnụnọ na MWC ebe ọ gosipụtarala ọnụ ahịa ọhụrụ ya abụọ: Leagoo S8 na Leagoo Power 5
Ulefone T2 Pro na Ulefone X: Ulefone ọhụrụ n'etiti
UleFone T2 Pro na Ulefone X: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere igwe ọhụrụ nke akara ndị China gosipụtara na MWC 2018.
Nke a bụ ọkwa ọkwa izizi nke Galaxy S9
Samsung etinyelarị na vidiyo YouTube nke ọhụụ ọhụụ Galaxy S9, ya na ọnụahịa ahụ na-akụ ahịa iji kpochapụ ekwentị ndị ọzọ nwere igwefoto.
Samsung Renove: usoro ego maka Galaxy S9. Chọpụta ihe banyere mmemme ego a ga-adị ruo Machị 25.
Ebe nchekwa kachasị dị na kaadi microSD na Galaxy S9 bụ 400 GB, karịa ohere zuru oke iji kpuchie mkpa ọ bụla.
ZTE Temp Go: Nkọwa nke ekwentị ọhụrụ nwere gam akporo Go
ZTE Temp Go: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke ga-arụ ọrụ na gam akporo Go.
Choputa ekwentị Nokia ise emere na MWC 2018
Nokia: Smarthpones gosipụtara na MWC 2018. Chọpụta ihe banyere igwe ndị ika ahụ gosipụtara na mmemme na Barcelona taa.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke asịrị, anyị mechara hapụ obi abụọ anyị ma anyị amatalarị ihe niile njirimara na nkọwa nke ọhụụ ọhụrụ Samsung: Galaxy S9
Ihe ndị a bụ nsonaazụ edozi nke Mediatek P60, mgbawa nke a ga-elekwasị anya na etiti etiti gam akporo
The Taiwanese Mediatek yiri ka ọ nwere mgbawa ọhụrụ nke a ga-elekwasị anya na etiti etiti gam akporo, nke ọnụnọ asatọ dị na 2GHz ọsọ pụtara ... Anyị na-ekwu maka Mediatek P60, SoC nke nwere ike ịbụ ọkọnọ na World World Congress nke Barcelona.
Microsoft na Xiaomi jikọtara ọnụ iji mepụta igwe ojii na akụrụngwa ọgụgụ isi na ọrụ
Microsoft na Xiaomi na-arụ ọrụ na ọgụgụ isi na igwe ojii igwe ojii na ọrụ. Chọpụta karịa gbasara nkwekọrịta ụlọ ọrụ abụọ a mechara bia.
Alcatel na-ewepụta usoro ọhụụ 1, 3 na 5 na MWC 2018
Alcatel na-egosi usoro ohuru ya 1, 3 na 5 na MWC 2018. Chọpụtakwuo banyere ọkwa ọhụrụ nke ika egosigoro n'ihu ọha.
BQ rere smartphones 1,1 nde n'afọ gara aga
BQ rere smartphones 1,1 nde n'afọ gara aga. Chọpụta ihe banyere data ahịa nke ụlọ ọrụ Spanish na afọ gara aga.
The mbụ video nke Samsung Galaxy S9 na S9 + na-leaked ndudue
Lee, anyị hapụrụ gị mbụ video nke Samsung Galaxy S9 na S9 + leaked ndudue ke ukara Samsung website. Vidio nke na-adịkwaghị na ọwa ya ma na Androidsis anyị nwere ya maka gị.
Evan Blass na-enye anyị nkọwa ọhụrụ banyere nkọwa nke Xperia XZ2 na XZ2 Compact
Enwere ụbọchị ole na ole fọdụrụ maka Mobile World Congress na Barcelona, ​​otu n'ime ihe omume teknụzụ kachasị ukwuu na nke kachasị mkpa n'ụwa, na Evan Blass, nzacha a ma ama, nwere ọtụtụ nkọwa ọhụrụ maka Sony Xperia XZ2 na XZ2 Compact. , ndị njedebe abụọ dị elu nke Sony ga-eweta na ngosi a.
Can nwere ike ịnweta Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2 na Spain
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2 adịlarị ire na Spain. Abụọ ndị mbụ site na Storelọ ahịa Sony maka naanị 429 na 329 euro n'otu n'otu, na L2 maka euro 229 site na Amazon dị ka ọrịre. Nweta ha ugbu a!
Ere ahịa ama ama mba ụwa dara na nke mbụ ya n’ihe karịrị afọ iri
Ahịa ama ama ajụla n'ahịa mgbe afọ 14 gachara, anyị nwere ụfọdụ echiche.
Huawei MediaPad M5 10 Pro: Mbadamba ụrọ nke Huawei bịarutere MWC 2018
Huawei MediaPad M5 10 Pro: Huawei Tablet maka MWC 2018. Chọpụta ihe banyere mbadamba nkume ọhụrụ a site na akara ndị China nke ga-abata na MWC 2018.
Ndị a bụ nkọwa nke Huawei FLA-AL10 na FLA-AL00 dị ka TENAA
Huawei, ụlọ ọrụ Asia nke dị na China, yiri ka echefuru ihe ngosi 16: 9, yana ya na Huawei FLA-AL10 na FLA-AL00, ngwaọrụ abụọ ndị akọwapụtara nkọwa ha na TENAA, ha na-akụ na ogwe 18: 9 akụkụ ruru. Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara ha!
Nke a nwere ike ịbụ nhazi nke Xiaomi Mi A2
Zọpụtara atụmatụ ga-ekwe omume nke Xiaomi Mi A2. Choputa ihe banyere onu ozo nke ohuru ohuru nke akara ngosi ndi China mara.
Samsung mee ndị nhazi 5G ọzọ site na Qualcomm
Samsung ga - eme ndị nhazi 5G ọzọ site na Qualcomm. Chọpụta karịa nkwekọrịta ọhụrụ dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ nke ha na-achọ iji na-achịkwa ahịa ahụ.
You maraworị nkọwa nke Meizu E3? TENAA na-ekpughere anyị ha
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, Meizu E3 pụtara na TENAA, onye nchịkwa China na onye nyocha nke gosipụtara ụfọdụ njirimara na nkọwapụta nke ngwa ọrụ a. Anyị na-egosi gị!
A na-emelite Honor 9 Lite na ihu mmeghe
The Honor 9 Lite emelitere na ihu ihu. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ nke na-abịa na ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China.
A na-eche na asọpụrụ 7C maka ekele maka TENAA na ndị a bụ nkọwa ya
Ihe doro anya Huawei Honor 7C ka edozichara yana njirimara ya na nkọwa ya maka TENAA, onye nyocha nke China nke ekwentị niile ga-ere na mba ahụ gafere. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Shadowgun Akụkọ Ifo na-abịa na gam akporo n’oge na-adịghị anya: ị nwere ike ịdebanye aha na Google Play ugbu a
Shadowgun Akụkọ Ifo na-abịa gam akporo n'oge na-adịghị anya: ị nwere ike ịdebanye aha na Google Play ugbu a. Chọpụta ihe banyere mbata nke nkeji ọhụrụ nke saga maara nke ọma.
Google ga ichere gam akporo igwe maka ahia eji
Google ga-achoputa mobiles gam akporo maka iji azụmaahịa. Chọpụta ihe gbasara mmemme ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ ịchọta ekwentị kacha mma.
The Huawei Enwe 8 na-anata asambodo nke TENAA na ndị a bụ nkọwa ya
The Mobile World Congress na Barcelona na-eru nso, Huawei ga-anọkwa na ọtụtụ ngwaọrụ ọhụụ ga-ebupụta na ihe omume a kwuru, mana, n'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ Asia na-elekwasị anya na ọdụ ndị ọzọ anyị ga-ahụ n'ọdịnihu, dị ka Huawei Enwe 8 , mobile nke anyị maaraworị njirimara ya.
Qualcomm ọgụgụ isi na-amalite iru ndị nhazi ugbu a
Qualcomm ọgụgụ isi na-eru ndị nhazi taa. Chọpụta ihe banyere mmepe ọhụụ nke ụlọ ọrụ na mpaghara a.
Machị 16 nwere ike ịbụ ụbọchị nke anyị ga-esi nweta Samsung Galaxy S9
Dabere na mbipụta nke ụlọ ọrụ South Korea nke Samsung nyere, Galaxy S9 nke anyị ga-ahụ na February 25 na Mobile World Congress na Barcelona, ​​ga-adị n'ụwa niile site na Machị 16. Na mgbakwunye, ozi ndị ọzọ anyị ga-agwa gị n'okpuru ka ekpughere anyị.
Facebook nwere data nke 40% nke ndị Europe
Facebook nwere data nke 40% nke ndị Europe. Chọpụta karịa ọtụtụ data data ụlọ ọrụ nwere na ya.
Google Pay: Ntughari ohuru nke gam akporo ugwo bu eziokwu
Google Pay: Ntughari ohuru nke gam akporo ugwo bu eziokwu. Chọpụta ihe gbasara ngwa ịkwụ ụgwọ ọhụrụ maka gam akporo dị ugbu a
Aquaris X2 na Aquaris X2 Pro: Ekwentị BQ ọhụrụ nwere gam akporo Otu
Aquaris X2 na Aquaris X2 Pro: Ekwentị BQ ọhụrụ ndị a na gam akporo Otu. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ abụọ sitere na akara Spanish nke ga-ada ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya.
A naghị akwado keyboard keyboard Swype ọzọ
Mgbe ọkwa Nuance kwusiri mmepe nke keyboard ya Swype, a manyere anyị ịchọ ndị ọzọ ka anyị nwee ike ịga n'ihu na-eji mmegharị ahụ n'ụzọ dị mfe mgbe ị na-ede.
Samsung Galaxy S9 + akara na Geekbench na Exynos 9810 na, ihe ijuanya, ọ dị ike karịa SD845!
Samsung Galaxy S9 + emeela akara ngosi Geekbench, otu n'ime akara ngosi a tụkwasịrị obi n'akụkụ AnTuTu. Dị ka Geekbench si kwuo, Galaxy S9 + nke Samsung nwere Exynos 9810 dị ngwa ngwa ma dị ike karịa na Qualcomm Snapdragon 845. Chọpụta!
6,6% nke ngwa gam akporo na-akwụ ụgwọ
6,6% nke ngwa gam akporo na-akwụ ụgwọ. Chọpụta karịa obere pasent nke ngwa akwụ ụgwọ anyị na-achọta na Storelọ Ahịa Play.
Nokia 8 Pro: Igwe di elu nwere igwe foto ise na Snapdragon 845
Nokia 8 Pro: Igwe di elu nwere igwe foto ise na Snapdragon 845. Chọpụta karịa maka ekwentị ọhụrụ nke ika ahụ ga-ada n’ahịa n’afọ a.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na Barcelona n'izu a
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na Barcelona n'izu a. Choputa ihe banyere oghere ulo ahia ndi China na Barcelona tupu MWC 2018.
Ndị a bụ nkọwa nkọwapụta nke mbadamba Samsung Galaxy Tab S4
Lelee ụdị nkọwa niile nke Samsung Galaxy Tab S4, nke na-anọchi ya na Galaxy Tab S3. Dabere na data e nyere, akụrụngwa a na-eji ihe nhazi asatọ, nnukwu ihuenyo 10.5 na gam akporo 8.0 Oreo, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ.
The Mobile World Congress na Barcelona na-eru nso. Olee ozi ọma Vernee kwadebeere anyị?
The Mobile World Congress na Barcelona na-abịaru nso, ya na ya, ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ anyị ga-achọpụta n'oge ihe omume ahụ. Nke a bụ ihe banyere Vernee, ụlọ ọrụ Asia nke kwadebeere anyị ọtụtụ ahịrị nke ọ ga-elekwasị anya na ngwaọrụ maka mpaghara ọ bụla. Anyị na-agbasawanye gị!
Enwere ike ịhụ Nubia NX606J na AnTuTu na Snapdragon 845 na 6GB nke RAM
Nubia NX606J abanyela na AnTuTu Benchmark na Qualcomm Snapdragon 845 processor, na 6GB nke RAM, ewezuga nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ onye asọmpi siri ike dị elu. Mara ya!
New leaked data si Huawei P20 Plus
Leaked data ọhụrụ banyere Huawei P20 Plus. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị elu site na akara ndị China nke ga-ada ahịa na March.
Asus Z01RD ejiri Qualcomm SD845 na 6GB RAM. Ọ ga - abụ ZenFone 5 ọhụrụ?
Asus, ụlọ ọrụ Asia, chọrọ ịbanye na ndepụta nke ndị na-emepụta ekwentị na-ahọrọ Qualcomm Snapdragon 845 dị ka ihe nhazi maka ọkọlọtọ ha. Nke a na - eme na Asus Z01RD, ekwentị mkpanaaka ka edozichara na AnTuTu yana SoC na 6GB RAM, yana mgbakwunye uru ndị ọzọ.
Choputa egwu ohuru nke Samsung mobiles for 2018
Samsung na-enye egwu ohuru maka mobiles gị na 2018. Chọpụta ụdị ọhụrụ nke karịrị The Horizon nke akara ahụ na-amalite na ahịa afọ a.
Nokia 4 anatala asambodo FCC
Nokia 4 enwetala asambodo FCC. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru di ala-etiti di nso ga agha n’ahia n’oge na adighi anya.
Google wedata ọnụahịa Pixel 2 nye ụfọdụ ndị nwe Nexus
Google wedata ọnụahịa Pixel 2 nye ụfọdụ ndị nwe Nexus. Chọpụta karịa gbasara nkwalite a nke ụlọ ọrụ na-eme na United States.
A na-agbasa nkọwa dị iche iche nke Samsung Galaxy J4 na GeekBench
Samsung Galaxy J4 abanyela na GeekBench benchmark na ụfọdụ nkọwa ya nke na-etinye ya dị ka etiti etiti yana uru dị mma. Chọpụta!
Kwadoro! A ga-egosipụta Alcatel 5, 3V na 1X na Mobile World Congress na Barcelona
Alcatel ka gosipụtara na a ga-ewepụta atọ n'ime ụdị ya na Mobile World Congress na Barcelona, ​​Spain. Ọ bụ banyere, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, na Alcatel 5, na 3V na 1X. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Facebook na-ewebata mmelite na ọrụ mberede ya maka ọdachi
Facebook na-ewebata mmelite na ọrụ mberede ya maka ọdachi. Chọpụta karịa banyere mgbanwe ndị ha ga-ewebata na ọrụ a bara ezigbo uru.
Onye enyemaka Google ga-aputa ọtụtụ mba na 2018
Onye enyemaka Google ga-adị na mba na asụsụ ndị ọzọ na 2018. Chọpụta ihe banyere mmalite enyemaka nke ụlọ ọrụ na ahịa ọhụrụ.
Nke a bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ ekwentị ama rere na 2017
Na 2017, a na-ere 1.457,5 nde ama zuru ụwa ọnụ. Chọpụta ihe banyere ọnụ ọgụgụ ekwentị ndị e rere gburugburu ụwa n'afọ gara aga.
6GB Ram Nokia 2017 (4) ga - emecha dị na India
Nokia 6 (2017) nke nwere 4GB RAM na 64GB nke ebe nchekwa dị n’ime, ga-adị na India site na FlipKart, ụlọ ahịa ama ama n’ịntanetị. Ọ ga-ere ere site na February 20 maka ego nke 16.999 rupees, nke ga-abụ ihe dịka euro 213.
Nokia 7+: Leaked mbụ ika gam akporo Otu ekwentị. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke ika a ga-eweta na MWC 2018.
The Hisense HLTE212T ka a hụrụ na oge mbụ na TENAA
E kpughere Hisense HLTE212T na TENAA, onye nchịkwa China na onye nyocha. Dabere na nchekwa data ya, ngwaọrụ a na-abịa na nkọwa na njirimara kwesịrị nke etiti / obere, dị ka 3GB RAM, 1.40GHz quadcore SoC, n'etiti ndị ọzọ. Mara ya!
Ihe osise vidio izizi nke Galaxy S9 dị ebe a
Samsung na-ebipụta vidiyo izizi mbụ nke Galaxy S9. Chọpụta ihe banyere vidiyo ndị a banyere ekwentị ọhụrụ dị elu site na akara Korea.
Asus X00RD ka edere ya na GeekBench, mobile, ikekwe ya na gam akporo Go
Companylọ ọrụ Asia Asus, yiri ka ọ nwere njedebe na gam akporo 8.1 Oreo na nsụgharị Go ya, yana ọtụtụ nkọwa na njirimara ndị na-ahụkarị nke mkpanaka ala, dị ka ihe nkwụsị na GeekBench si kwuo. Chọpụta!
Google rere okpukpu abụọ nke pixel phones na 2017 ma e jiri ya tụnyere 2016
Ahịa nke Google Pixel dị okpukpu abụọ na 2017. Chọpụta ihe banyere mmụba nke ahịa nke ọgbọ nke abụọ nke ekwentị Google.
AnTuTu na-ekpughe Sony H8266, ekwentị nwere Qualcomm Snapdragon 845 SoC na 4GB RAM
Na nso nso a na AnTuTu, Sony H8266, nke onu ogugu site na ya ka agbasaworo ụfọdụ nkọwa ya, dịka ihe ọ na-egosi anyị, ga-abụ akụkụ nke ọkwa kachasị elu na katalọgụ nnukwu ndị Eshia. Tinyere Snapdragon 845, 4GB nke RAM, na gam akporo 8.0 Oreo, kedu nkwa.
Egwuregwu kachasị mma iji nwee ọ asụ dị ka di na nwunye na ụbọchị Valentine
Taa, anyị na-ewetara gị n'elu 10 nke egwuregwu kacha egwu na egwuregwu iji soro onye gị na ya nwee obi ụtọ, ma ọ bụ na-enweghị ya, na ụbọchị Valentine.
Nokia rere ekwentị karịa OnePlus, HTC ma ọ bụ Sony na nkeji iri na ise gara aga
Nokia karịrị HTC na Sony na ahịa na nkeji iri na ise gara aga. Chọpụta karịa banyere ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ karịa ndị na-agba ya.
Gmail Go: Thedị ọkụ nke Gmail na-abịa Google Play
Gmail Go na eze biara na Google Play. Chọpụta ihe gbasara ụdị Gmail dị fechaa nke dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Ekwentị dị mkpa rere nkeji 88.000 n'ime ọnwa isii
Ekwentị dị mkpa jisiri ike ree 88.000 nkeji na 2017. Chọpụta karịa maka ahịa dị ala nke ekwentị dị mkpa na afọ gara aga.
Xiaomi na-arụ ọrụ na smartphone maka ịgba egwu
Xiaomi na-arụ ọrụ ugbu a na smartphone na-egwu egwu. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ya mbụ egwu egwuregwu ama.
Ihe Xiaomi Redmi Rịba ama 5 leaked tupu ya ngosi
Nzacha ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi Redmi Rịba ama 5. Chọpụta atụmatụ nke ekwentị ahụ, bụ nke edozichara tupu ya ewepụta na February 14 a.
Sony Xperia XZ2 Pro: Benchmark nke Sony izizi nwere ihuenyo 18: 9. Chọpụta ihe banyere ekwentị Sony ọhụrụ ga-nzọ na usoro ọhụrụ.
Snapdragon 845 gosipụtara ndị nrụpụta ndị ọzọ na ike
Snapdragon 845 dị ike karịa ndị ọzọ nhazi. Chọpụta karịa etu esi nwalee ihe nhazi ahụ iji hụ ike ya.
Gam akporo Auto ga-abịa Clarion, Karma Automotive, Boss Audio team n'etiti ndị ọzọ
Gam akporo Auto website ka gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ndị na-ama dakọtara na nke a ụgbọala nkwukọrịta technology.
Ihe omuma ohuru nke Xiaomi Mi Mix 2S kwadoro na o gha abia na Snapdragon 845 na 8GB nke RAM.
Naanị ụbọchị ole na ole site na Mobile World Congress nke ga-eme na Barcelona, ​​Spain, Xiaomi Mi Mix 2S na-enye ihe iji kwuo maka ya. N'oge a, n'oge na-adịbeghị anya, agbapụtala ọtụtụ nkọwa na-akwado na ọ ga-abata na Snapdragon 845, 8GB nke RAM, yana onye na-agụ akara mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo.
Snapdragon 670: Nhazi usoro ohuru ohuru
Snapdragon 670: Nkọwa nke usoro nhazi ọhụụ ọhụrụ. Chọpụta karịa ihe nhazi ọhụrụ nke Qualcomm.
Ihe ndị a ga-abụ njirimara nke Xiaomi Mi 7 dịka ntanye
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ nkọwa nke nkọwa na njirimara nke Xiaomi Mi 7 nwere ike ibu, njedebe na-esote ụlọ ọrụ Asia nke ga-ahụ ìhè na afọ a, ikekwe na MWC ga-eme na Barcelona, ​​Spain, agbagola.
Huawei Mate 10 Pro na-enweta ule ntachi obi dị ukwuu
The Huawei Mate 10 Pro na-egosi na vidiyo nke nguzogide dị egwu.Ọ ga - eguzogide ihe kachasị sie ike?
Elephone bịarutere Spain na Elephone U na U Pro
Elephone ala na Spain na Elephone U na U Pro. Chọpụta ihe banyere mbata akara nke China na ekwentị ọhụrụ ya dị n'etiti.
Google Drive nwere ike ịza ajụjụ na akwụkwọ edere na Office, PDF na onyonyo na-enweghị ịtụgharị ha
Ọrụ ọhụrụ nke Google Drive gbakwunyere, na-enye anyị ohere itinye ihe na akwụkwọ Office, onyonyo yana n'ụdị PDF na-enweghị ịgbanwe akwụkwọ.
Dị nke ọzọ nke Kodi, nke dị ugbu a na beta, ga-enye anyị ndakọrịta na onye enyemaka Google, Google Assistant
Turing, ụlọ ọrụ Turing ekwentị ụlọ ọrụ maka enweghị ego. Chọpụta ihe banyere enweghị ego nke ụlọ ọrụ Finnish nke na-anaghị etinye ekwentị na ahịa.
Simyo ga - enyere gị aka ịchọta megabytes a na - echeghị eche
Simyo ga - enyere gị aka ị gbakọba mega-bonuses nke ị na-agaghị eri iji nwee ike imefu ha n'ime ọnwa atọ na - esote.
Bido iwu Ulefone Power 3S na GearBest, ekwentị mkpanaaka nwere batrị 6350mAh na mmata ihu!
Companylọ ọrụ China Ulefone, akwadebewo Ulefone Power 3S, ọnụ ọgụgụ dị elu nke nwere ọtụtụ elele dịka mmata ihu, nnukwu batrị 6.350mAh, kamera anọ, onye na-agụ akara mkpịsị aka, na ọtụtụ ndị ọzọ maka naanị $ 169.99 kama nke mbụ $ 229.99.
The Xperia XA2 na XA2 Ultra tinye usoro ihe omume Sony Open
Xperia XA2 na XA2 Ultra dị na mmemme Sony Open Device. Chọpụta ihe banyere ọnụ ụzọ nke ọnụ na mmemme a.
Ihe ngosi Xiaomi Redmi Rịba 5 ga-eweta na February 14
Xiaomi Redmi Rịba ama 5 ga-eweta na ihe omume na India. Chọpụta ihe banyere mmemme mbido ekwentị nke ndị ahịa na February 14.
A na-edozi ihe oyiyi mbụ nke ZenFone 5, nke a ga-ewepụta na MWC
Izu ole na ole tupu ngosi nke usoro ZenFone 5, a nụchara ihe onyonyo izizi nke otu ngwụcha nke ga-abụ akụkụ nke Asus ọhụrụ a maka 2018.
E kpughere atụmatụ nke Huawei P20 ekele maka mkpuchi ya
Huawei P20: Ejiri mkpuchi ya weghachite atụmatụ nke ngwaọrụ ahụ. Chọpụta ihe banyere nhazi nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China, nke amaralarị ekele maka mkpuchi ya.
Nokia 7 Plus agbachapụla: Mara ihe onyonyo ya na nkọwapụta ya
Nokia 7 gbakwunyere: Ihe onyonyo leaked na nkọwa Chọpụta ihe gbasara ekwentị Nokia ọhụrụ a ga-ewepụta na MWC 2018.
Nokia rere 8,5 nde ama ama na 2017
Nokia eretala nde ekwentị 8,5 n'afọ gara aga. Choputa ihe banyere ire ahia a na 2017, afọ o laghachiri ahia ahu.
YouTube Go ruru ihe karịrị mba ọhụrụ 130
YouTube Go na-ebupụta ihe karịrị mba ọhụrụ 130. Chọpụta karịa gbasara ntọhapụ nke ụdị dị fechaa nke ngwa ndị ewu ewu na mba ndị ọzọ.
Qualcomm na Samsung wusiri mmekọrịta ha na nkwekọrịta ọhụrụ ike
Qualcomm na Samsung mechiri nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ. Chọpụta ihe banyere nkwekọrịta ọhụrụ nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ mechiri.
ASUS Zenfone 5 ga-eweta na MWC 2018
ASUS ga-egosi Zenfone 5 na MWC 2018. Chọpụta karịa maka ngosi ụbọchị nke ika ọhụrụ igwe.
Esi nyefee mkparịta ụka WhatsApp gị na iPhone gaa na ngwaọrụ gam akporo
Ọ bụrụ na anyị kpebiri ịme site na iPhone gaa na njedebe gam akporo, ịnyefe mkparịta ụka WhatsApp abụghị nsogbu, ọ bụ ezie na WhatsApp anaghị eme ka ọ dịrị anyị mfe, site na ịchekwa faịlụ ndị ahụ na sava dị iche iche.
Huawei P20 enweela ụbọchị ngosi ngosi
A ga-ewepụta Huawei P20 na Machị na ihe omume na Paris. Chọpụta ihe banyere ngosi nke njedebe dị elu nke akara ndị China nke ga-abụ na Machị.
Njirimara, nkọwa na leaked price nke Alcatel 5, a na-ekwe nkwa n'etiti-nso
Alcatel 5 na-ewepụta ọtụtụ uzu ebe ọ bụ na e gosipụtara ya na Consumer Electronics Show na Las Vegas nke mere ọtụtụ izu gara aga. Ugbu a, nchapu ọhụụ ọhụụ na-akwado ọtụtụ njirimara na nkọwapụta nke anyị maara. Anyị na-agbasawanye gị!
Instagram na-akwadebe ịkpọ oku vidiyo n'oge na-adịghị anya
Instagram ga - enwe oku vidiyo na ngwa a. Chọpụta ihe gbasara ngwa ahụ ga-ewebata n'ime ọnwa ole na ole.
Xiaomi ga - emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ na Spain
Xiaomi emepee ụlọ ahịa ọhụrụ na Spen ma gbasaa ya na Italytali. Chọpụta ihe maka atụmatụ a maka ika maka mgbasawanye na Europe.
Google Play ga - enyere gị aka ịchekwa ohere site n’ikwu ngwa ndị ị na - ejighi
Zọpụta oghere na Google Play: Ọ ga - agwa gị ngwa ndị ị ga - ewepụ. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ngwa ngwa ahụ na-eme atụmatụ iwebata.
Ihe oyiyi izizi nke Meizu 15 Plus ka edozichara
Nzacha mbụ oyiyi nke Meizu 15 Plus. Chọpụta ihe gbasara ekwentị site na akara ndị China nke ekpugherela atụmatụ ha na nsụgharị ndị a.
Huawei na-akwadebe ọzọ MediaPad M5, mbadamba nkume nke ga-anọchi ya dị ka onye nọchiri MediaPad M3 nke e gosipụtara na IFA na Berlin n'afọ gara aga. Anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ya ma anyị ga-egosi gị atụmatụ ya!
Galaxy S9 ga - amata ihu na iris n'otu oge. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ nke ekwentị ika ga-agụnye iji kpọghee ekwentị.
Samsung Galaxy S9 nwere ike ịbata na Europe na ụdị SIM abụọ
Dị ka a na-leaked na Samsung si German nkwado website, ọzọ Galaxy S9 nwere ike mee ka a sọrọ SIM version na European ahịa.
Huawei P20 ga-abata na agba ndị a na ahịa
Mụta maka agba nke Huawei P20 ga-akụ ụlọ ahịa. Ọdịdị ọhụrụ dị elu nke akara ndị China na-abịa n'ahịa n'oge na-adịghị anya, anyị amaworị na agba.
Smartwatches kachasị mma iji nyochaa mmega ahụ anyị
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche maka nwa oge na ọ bụ oge ịhapụ ọnụọgụ ọnụọgụ ịmalite iji smartwatch, n'isiokwu a anyị na-egosi gị ndị nwere smartwatches kachasị mma nke ga-enyere anyị aka inyocha ọrụ anyị ma jiri uru ya rụọ ọrụ. .
Thekpụrụ nke ọbara anyị ga-enye anyị ohere ị kpọghee Samsung Smartphones
Afọ abụọ gara aga, ụlọ ọrụ Korea nke Samsung gosipụtara usoro nyocha nke ndị ọrụ na-atụle nrugharị ọbara na akwara.
Nokia 7 Plus gosipụtara ụfọdụ nkọwa ya na GeekBench
Nokia 7 Plus agbakwunyere na GeekBench na-egosi ụfọdụ nkọwapụta dị n'ime ya, dịka Qualcomm Snapdragon 660 processor na Android Oreo. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Kpoo Hisense H11 na H11 Pro, igwe mobi abuo
The Hisense H11 na H11 Pro bụ etiti abụọ dị n'etiti na njirimara na njirimara na nkọwa dị ala, nke, n'ihe banyere H11, ọ dịlarị ire ere na Spain, mana n'ihe gbasara H11 Pro, ọ nwere emebeghị ka ọ dị na ahịa. Mara ha!
Galaxy S9 Official Hapụ Lebọchị Leaked
Otu ọnwa tupu ngosipụta nke Galaxy S9, akara ngosi nke akara Samsung ọhụụ abanyelarịrị, onyonyo nke Evan Blass bipụtara ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ n’ezie ekwentị na-eguzogide ọgwụ, jiri ohere ahụ nke NOMU na-enye anyị mee ụbọchị ole na ole
Onye nrụpụta NOMU na-enye anyị ọnụ ọgụgụ ọdụ ya niile yana mbelata ego dị iche iche iji mee ememme Afọ Ọhụrụ ndị China.
Xiaomi ereworị ekwentị karịa Samsung na India
Xiaomi karịrị Samsung na ahịa na India. Chọpụta karịa gbasara ọnụ ọgụgụ ahịa ụlọ ọrụ China na mba Eshia chụpụrụ Samsung.
Samsung Pay akwụalarị ihe karịrị 100 nde euro na Spain kemgbe mmalite ya
Samsung ka bipụtara data metụtara usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị ya na ebe anyị nwere ike ịhụ etu o si rụọ ọrụ karịa 100 nde dollar kemgbe mmalite ya na Spain
Nintendo imechi Miitomo na Mee
Miitomo: Egwuregwu mbụ nke Nintendo kwụsịrị na May. Chọpụta ihe banyere mmechi nke egwuregwu mbụ ụlọ ọrụ wepụtara maka gam akporo.
Nwere ike ịzụta ụlọ na Amazon ugbu a
Amazon, site na Altamira Real Estate Group, ga-ewepụta oghere ọhụrụ na weebụsaịtị ya site na ebe anyị nwere ike ịzụta ụlọ.. Ga-azụta ụlọ gị na Amazon?
Nkọwa nke Vivo X20 Plus, ekwentị mbụ nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo
Dị ka anyị kwupụtara na ụbọchị ole na ole gara aga, ụnyaahụ bụ ụbọchị nke onye nrụpụta Asia họọrọ maka ...
European Union na-akwụ ụgwọ Qualcomm na mma nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.000 nde euro
2017 ga-abụ afọ nke Qualcomm ga-achọ ichefu banyere akụkọ kachasị ọhụrụ ya. Kemgbe afọ 2017, Qualcomm ga…
Samsung Galaxy S9 ga-eweta na February 25
Ọ bụ ọrụ: Samsung Galaxy S9 gosipụtara na February 25. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke ụdị Korea.
Samsung Galaxy S9 leaked ke ọhụrụ ezigbo video
Leaked a ọhụrụ ezigbo video nke Samsung Galaxy S9. Choputa ihe banyere vidio a nke ekpuchitere na ekwentị nke akara Korea nke eji hu ihuenyo nke ekwentị.
Ihe nlele mbu nke Google I / O 2018 na-enye anyi ihe omuma banyere aha gam akporo P
Nghọta mbụ nke Google I / O 2018 bụ nke amaara. Chọpụta ihe banyere nyocha mbụ nke Google I / O 2018, mmemme nke a na-ewepụta akụkọ Google kwa afọ.
Samsung gọrọ ebubo nke ịkụda ngwa ngwa ya
Koreanlọ ọrụ Korea na-egosi na ọ kpọtụrụla ndị ọchịchị Italiantali iji dozie obi abụọ ọ bụla nwere ike ịdị banyere ntinye Samsung na ndị ahịa ya.
ZTE kwụsịrị nọmba asatọ ma maa ọkwa Axon 9, onye nọchiri Axon 7
N'oge na-adịbeghị anya, na ngosi nke ZTE Axon M maka ahịa ndị China, ụlọ ọrụ Asia kwupụtara na onye nọchiri Axon 7 ga-abụ Axon 9, bụ ọnụ ga-abata n'afọ a iji mee ka ihe ịga nke ọma nke onye bu ya ụzọ mee. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Samsung bụ ụlọ ọrụ ekwentị kacha depụtaghachi na 2017
Dabere na akụkọ Antutu kachasị ọhụrụ, onye nrụpụta Korea Samsung bụ onye rụpụtara klọọkụ n'ụwa niile, Apple na-esokwa ya n'azụ.
Ndị a bụ ekwentị nsọpụrụ nke ga-emelite EMUI 8
Sọpụrụ ekwentị enenyere na-enweta EMUI 8. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ekwentị na ga-enwe ike imelite ọhụrụ version nke customization oyi akwa.
Ulefone Power 3 Max ga-enwe nnukwu batrị 13.000mAh
Ulefone kwadoro na ọ na-arụ ọrụ na onye nọchiri Power 3 ... Ọ bụ Ulefone Power 3 Max, ọnụ dị ike nke ga-abịa nnukwu batrị 13.000mAh iji gbochie ihe niile anyị chọrọ n'agbanyeghị agbanyeghị oge. Anyị na-agbasawanye gị!
Galaxy S9 ga - enwe ike idekọ vidiyo na nwayọ nwayọ na 480 fps na ogo 1080p
Ka ụbọchị ngosi nke Galaxy S9 na-eru nso, nke nta nke nta na njirimara ọhụrụ nke ọhụụ Samsung ọhụrụ ga-enye anyị na-akwado ya.
Ekwentị mbụ nwere ihe mmetụta ngosipụta, Vivo X20 Plus, ga-egosi n'ihu echi
Echi, Jenụwarị 24, a ga-egosi Vivo X20 Plus nke mbụ ama ama nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo ahụ.
Instagram ga-agwa gị ma ọ bụrụ na ịdekọ ihuenyo ahụ
Instagram ga-agwa onye ọrụ ahụ mgbe ịdekọchara ihuenyo. Chọpụta ihe banyere usoro ọhụụ nke na-abịa ngwa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Malite na February, Samsung Cloud ga-akwụsị ịme mbipụta nke data sitere na ngwa ndị ọzọ
Samsung ezigala nkwupụta na ndị ọrụ Samsung Cloud niile na-agwa banyere mgbanwe ndị ga-emetụta ikpo okwu dịka nke February 6, ebe ọ bụ na site na ụbọchị ahụ, enweghị ike ịchekwa data sitere na ngwa ndị ọzọ.
Pepephone, chọpụta onyinye kacha mma na ọnụego na ekwentị mkpanaaka na eriri
Chọpụta onyinye niile dị mma na ọnụego site na Pepephone. Guysmụ okorobịa ahụ sitere na Pepephone tinye n'aka anyị usoro nke ekwentị na eriri na-enye anyị na anyị agaghị enwe ike ịjụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ego na nkwukọrịta anyị. Gịnị ka ị na-eche iku iku gị Pepephone ọnụego ya na nke kacha mma?
Nokia 10 nwere ike ịbụ ekwentị izizi nwere kamera ise
Asịrị mbụ metụtara Nokia 10, na-atụ aro na ụlọ ọrụ Finnish na-ezube ịnye igwefoto 5 n'azụ ngwaọrụ a nwere atụmatụ yiri nke Nokia Lumia 1020 na-enye.
Sony mechiri ọrụ ọnọdụ ekwentị "My Xperia"
My Xperia, ọrụ ekwentị ekwentị Sony mechiri. Chọpụta ihe banyere mmechi nke ọrụ ekwentị locator ọrụ.
10 ekwentị ndị kacha ere ahịa na China na 2017
TOP 10 smartphones na-ere ere na China na 2017. Chọpụta ihe banyere ndepụta ahụ na ekwentị ndị kacha ere ahịa na China n'afọ gara aga.
Twitter ga-agbakwunye nhọrọ iji chekwaa tweets ka ị gụọ mgbe e mesịrị na mmelite ọzọ
Ihe ntanetị mmekọrịta microblogging amalitela ịnwale ọrụ ọhụrụ nke ga-enyere anyị aka ịchekwa maka njikọ nke tweets ndị kachasị amasị anyị ịgụ na mgbe na-adịghị anya.
Ohi kaadị ndị OnePlus tara ahụhụ na-emetụta ndị ọrụ 40.000
Otu izu mgbe ekwuputara ọgụ nke OnePlus tara ahụhụ ọnwa abụọ yana nke metụtara ịnweta kaadị akwụmụgwọ, ụlọ ọrụ Asia gosipụtara na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nwere ike ịbụ ihe dị ka 40.000
Samsung napụtara Jenụwarị Nche Mmelite maka Galaxy S8 na S8 +
Mmelite nche Jenụwarị maka Samsung Galaxy S8 na Galaxy S8 + dị ugbu a maka nbudata.
Paykwụ ụgwọ WhatsApp ga-abata na India n'ọnwa ọzọ
You nwere ike iche n’echiche ihe ọ ga - adị ka ịkwụ ụgwọ ya na WhatsApp? N'oge na-adịghị anya, ị nwere ike ime ya, WhatsApp Pay nwere ike ịbịa ọnwa na-abịa na India
Google Chrome maka gam akporo ga-adị ngwa ngwa karịa nbudata DNS
Chrome maka gam akporo ga - eji nbudata DNS dị ngwa. Chọpụta karịa ihe ọhụụ nke ihe nchọgharị na-ewe ngwa ngwa.
Download na akwụkwọ ahụ aja nke Google ọhụrụ sistemụ: Fuchsia OS
Sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke Google na-arụ ọrụ na nke nwere ike dochie gam akporo na os os a na-akpọ Fuchsia os na anyị na-enye gị akwụkwọ ahụ aja nke mbido nsụgharị
Ihe omume Linda nwere ike ibido na Septemba na ekwentị 2 Razer
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ọgbọ nke abụọ nke Razer Phone 2 ga-abịa na aka Linda, ngwa nke anyị nwere ike iji mee ka ekwentị anyị dị na laptọọpụ ma nwee ọ enjoyụ na njedebe anyị n'ụzọ dị ukwuu.
A na-ahụ Xiaomi Mi Max 3 na nkwụsị
Zute data mbụ nke Xiaomi Mi Max 3 mgbe ị gachara. Chọpụta ihe banyere ehi mmiri a nke nweta data mbụ sitere na ekwentị.
WhatsApp Business dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play
WhatsApp Business dị ibudata na tolọ Ahịa Play. Chọpụta ihe banyere ụdị nke ngwa maka ụlọ ọrụ, dị ugbu a
Nke a bụ ihe ọhụrụ Exynos 7872 sitere na Samsung
Samsung egosiputa Exynos 7872 ọhụrụ ahụ, onye nhazi nke ụlọ ọrụ Korea nke emere maka etiti ga-ebupụta n'ahịa ahụ na 2018 niile, ebe Meizu M6s bụ smartphone mbụ iji mejuputa ya.
Google nwere atumatu ohuru ka inwere ike ileghari ozigbo
Atụmatụ Google ka ị nwee ike ịchọgharị ọsọ ọsọ. Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ọhụrụ ụlọ ọrụ ahụ mepụtara iji nyere gị aka ịnyagharịa nke ọma.
Samsung na-ebupụta mbipụta pụrụ iche nke 8 Galaxy Note nke sitere na Winter Olympics
Koreanlọ ọrụ Korea nke Samsung na-agba Winter Olympics na mwepụta nke obere mbipụta nke Galaxy Note 8 na-acha ọcha.
Enwere ike igosi Xiaomi Mi 7 na MWC 2018
Xiaomi nwere ike iweta Xiaomi Mi 7 na MWC 2018. Chọpụta karịa gbasara nkwenye ndị ụlọ ọrụ ahụ bịara na mmemme ahụ.
Ndị a bụ ekwentị 40 Xiaomi nke ga-emelite MIUI 9
Igwe ekwentị 40 Xiaomi ndị na-aga imelite MIUI 9. Chọpụta ihe banyere ndepụta a yana ekwentị nke ika ga-enwe MIUI 9 n'oge na-adịghị anya.
Instagram ga-eziga ọkwa mgbe ị na-enweta nseta ihuenyo
Instagram ga - agwa gị mgbe ị na - ewere nseta ihuenyo. Choputa ihe banyere uzo ohuru nke netwọkụ mmekọrịta na-aga.
Nzube na nkọwa a ga-ekwe omume na ọnụahịa nke Alcatel 3V
A hụrụ Alcatel 3V na Consumer Electronics Show (2018) na Las Vegas, ọ bụ ezie na edeghị nkọwa ya na njirimara ya, ọ bụ ya mere ọtụtụ asịrị ji pụta banyere ha. Anyị na-agwa gị!
Ihe oyiyi mbụ nke Moto Z3 na Moto Z3 Play na-edozi
Ihe oyiyi ndị mbụ na-akwadoghị nke Moto Z3 na Moto Z3 Play amalitelarị bipụtara, ọnụahịa ndị ga-erute ahịa nwere ihuenyo 6-inch nke na-enweghị n'akụkụ ọ bụla.
Samsung Galaxy S9 nwere ike debe ya na Machị 1
Otu ọnwa tupu ngosipụta nke Galaxy S9, ọ dị ka ụlọ ọrụ Korea chọrọ itinye ụdị ihe atụ a ozugbo enwere ike.
Nkọwa nke iLA X, iPhone X mmepụta oyiri, ugbu a maka tupu-iji
Ọ bụrụ na ị na-achọ okike iPhone X, iLA X nwere ike ịbụ ngwaọrụ ị na-achọ ma ọ bụrụ na ịchọghị itinye nnukwu ego.
Ejirila HTC U11 EYE rụọ ọrụ, anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ya
Ejirila HTC U11 EYE rụọ ọrụ ugbu a ma anyị nwere atụmatụ na nkọwa niile nke njedebe dị n'etiti etiti. Mara ya!
Xiaomi malitere Android Oreo melite Mi A1 ọzọ, ụbọchị mgbe ewepụrụ ya
Xiaomi na-eme ọsọ ọsọ iji dozie nsogbu ndị gam akporo Oreo melitere na Mi A1 na mmelite ohuru na chinchi niile dị ugbu a.
The Motorola / Lenovo Moto E5 apụtawo na mbụ leaked image, anyị nwere nkọwa na anyị chọpụtara na ndị ga-ekwe omume e ji mara
Samsung Galaxy A8 (2018) adịlarị maka ire ere na ndị ọrụ ekwentị Movistar na Vodafone dị na Spain maka ihe dịka 499 euro na 479.99 euro n'otu n'otu. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Na North Korea, n'agbanyeghị ọchịchị aka ike ha na ọchịchị Kọmunist ha, ha na-enwe ọ smartphonesụ na smartphones fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị, Yves ha nwere Arirang 151, gam akporo gam akporo nwere ọtụtụ ngwa na-atọ ụtọ yana ịdị nwayọ na nkọwapụta doro anya, mana arụ ọrụ. Anyị na-ewetara gị ya!
YouTube ga-ewepụta ọnọdụ incognito, ọnọdụ gbara ọchịchịrị na mmegharị ọhụụ ịhapụ egwu mgbasa ozi [APK]
Kemgbe ọtụtụ afọ, YouTube abụrụla naanị ebe ikpo okwu ebe anyị nwere ike ịchọta vidiyo ọ bụla na ...
A na-emelite ihe nchọgharị Microsoft Edge maka gam akporo Oreo na akụkọ na-adọrọ mmasị
Microsoft Edge emelitere ma jikọta aghụghọ ma akụkọ na-atọ ụtọ maka mmelite gam akporo Oreo. Otu n'ime ha bụ Akara ngosi Mgbanwe nke ụdị OS a maka ngwa a, yana mmelite na ọgụgụ. Chọpụta!
Xiaomi kwusiri mmelite na gam akporo Oreo nke Xiaomi Mi A1
Xiaomi kwusiri mmelite na gam akporo Oreo nke Xiaomi Mi A1. Chọpụta ihe banyere mkpebi ụlọ ọrụ ahụ kpatara ọtụtụ nsogbu arụmọrụ.
Dika data ekpughere site na onyogho ohuru nke Galaxy S9, igbe ahu, anyi nwere ike ihu otu igwefoto si enye anyi oghere nke ahutaghi na ama tinyere okwu okwu AKG mebere.
Atụmatụ ọdịnihu nke Google, mgbe ha nwetasịrị akụkụ nke nkewa telifon nke HTC, bụ ijikọ ndị na-ekwu okwu ihu igwe iji belata nkenke nke njedebe ha.
OnePlus chọrọ ịdata na United States ma maliteworị na kọntaktị ahụ
Firmlọ ọrụ ahụ bụ OnePlus kwusịrị na ọ malitere ịmalite mkparịta ụka na ndị ọrụ America ka ha nwee ike ịrịda na United States.
Xiaomi Redmi Rịba ama 5A na-ere ihe karịrị 1 nde nkeji n'otu ọnwa
Xiaomi Redmi Rịba ama 5A na-ere ihe karịrị otu nde nkeji na ọnwa. Chọpụta ihe banyere ahịa dị ala nke akara ndị China
Aghụghọ iji melite arụmọrụ GPS
4 aghụghọ iji melite arụmọrụ GPS. Chọpụta aghụghọ ndị a dị mfe nke na - eme ka GPS gị rụọ ọrụ nke ọma karị ma nwekwa nkenke ka ukwuu.
HMD nweta ikike Asha
HMD ka nwetara ikike niile ngwaahịa Nokia na usoro Asha, nso nso nke Microsoft nwere n'oge gara aga. Companylọ ọrụ Finnish a ga-ahụ maka ịre ahịa ndị otu obere ọrụ a. Anyị na-agwa gị!
Ugbu a ee, Android Oreo adịlarị maka onye OnePlus 5
Onye nrụpụta OnePlus ka malitere ọgbara ọhụrụ nke gam akporo Oreo maka OnePlus 5, mana oge a bụ nke siri ike karịa nke ọ malitere na ngwụcha ọnwa Disemba afọ gara aga.
Huawei Mate 10 na Mate 10 Pro ga-adị na Storelọ Ahịa Microsoft site na February
Huawei abanyela nkwekọrịta na Microsoft iji tinye Mate 10 na Mate 10 Pro na-ere na ụlọ ahịa nke ụlọ ọrụ Redmond nwere na United States.
Maze Alfa na Comet dị na GearBest na eBay
Maze Alpha 4G na Comet di ire na GearBest na Ebay. A ga-ere ngwaọrụ ndị a n'etiti oge maka obere oge. Jiri uru!
Emebere ulo oru Ulefone Armor 2S siri ike nke IP68
Emeputara Ulefone Armor 2S site na Aliexpress maka naanị $ 199.99. Ngwaọrụ a nwere asambodo IP68 nke na - eme ka ọ ghara iguzogide ọkọ, ájá, mmiri na mmegbu ndị ọzọ. Anyị na-ewetara gị ya!
LG na-agba ọsọ n'ụgbọ mmiri ma ghara ịmalite ọhụụ ọhụụ kwa afọ
LG ụlọ ọrụ Korea, ekwuputala na ọ ga-akwụsị ịmalite ekwentị kwa afọ, yabụ anyị anaghị atụ anya mmegharị kwa afọ nke flagship ya.
Nokia 8 na-enweta otu n’ime akara kacha njọ na DxOMark
Igwefoto Nokia 8 dara ụda na DxOMark. Chọpụta karịa gbasara nyocha a na mbido akara ọjọọ a.
Nweta Vernee X 4GB Ram na 64GB ROM maka naanị $ 199.99 na Aliexpress
Vernee X 4GB + 64GB dị ọnụ ahịa na $ 199.99 na-enweghị atụ na Aliexpress. Ọnụ a nwere ụdị njirimara dị n'etiti, ọ bụ ezie na ị nwere atụmatụ mara mma nke ga-amasị gị.
Vernee Apollo 2 ga-abata na February na Mobile World Congress
N'oge na-adịbeghị anya, Vernee wepụtara ụdị Apollo 2 na ibe Facebook ya. Ọnụ a ga-abịa dị ka onye nọchiri Apollo nke afọ gara aga, ga-abịa yana nkọwapụta na atụmatụ ka mma kpamkpam.
Budata akwụkwọ ahụ aja nke Huawei Mate 10 Porsche Design
Ọ bụrụ n’abụghị ịzụrụ ịzụta Huawei Mate 10 Pro Porsche Edition, n’isiokwu a anyị na-enye gị akwụkwọ ahụaja pụrụ iche nke 8 nke ọnụ a, ka ị nwee ike ịwụnye ha na ngwaọrụ gị, agbanyeghị ụdị ahụ.
Alcatel 3C: Nkọwapụta na mbụ leaked oyiyi
Alcatel 3C: Nkọwapụta na onyonyo ndị ọchịchị leaked. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ site na akara French nke ga-abata afọ a.
Facebook ga-egosiputa ihe ederede sitere na ndị enyi na ezinụlọ
N’afọ a nnukwu netwọkụ mmekọrịta ga - enwe mmelite dị ukwuu nke ga - agbanwe ya kpamkpam, mara mgbanwe niile Facebook ga - enwe na 2018
Choputa Moviphone: Smartphone ọhụrụ ahụ nwere igwe nyocha HD ewepụtara na CES na Las Vegas
Anyị na-ewetara gị ọhụrụ Moviphone, smartphone ewetara na CES na Las Vegas, ezigbo maka ikiri ọkacha mmasị gị na fim, vidiyo na ihe oyiyi dị ka ọ nwere HD mma projector.
Nweta Blackview A10 maka naanị $ 88.99 kama $ 130.39 na Cafago!
Blackview A10 dị na ọrịre dị egwu na Cafago, ị nwere ike nweta ya maka naanị $ 88.99 karịa $ 130.39 nke ọnụahịa mbụ ya na koodu coupon. Anyị na-enye gị nkọwa!
A ga-ewepụta Huawei Honor 9 Lite na India n'oge na-adịghị anya
Huawei Honor 9 Lite ga-ebido ma bido ire ya na India n'oge na-adịghị anya. Ndị ụlọ ọrụ China kwadoro nke a, ọ bụ ezie, n'oge ahụ, amabeghị ụdị nsụgharị ma ọ bụ agba ọ ga-abịa. Anyị na-agwa gị nkọwa ya!
Oukitel K10 Nkọwapụta Ikpeazụ
Mgbe ọtụtụ izu nke asịrị na nchere, ụlọ ọrụ Okitel mechara wepụta nkọwa, atụmatụ na ọnụahịa nke Oukitel K10000, ọnụ na batrị 11.000 mAh.
Na ngwa a ị nwere ike ịtụgharị ekwentị Razer n'ime laptọọpụ
Razer gosipụtara na usoro nke CES nke a na-eme ụbọchị ndị a na Las Vegas, Razer Dock, ọrụ na-adịghị adị ugbu a, nke ahụ na-emekwa ka Razer Phone ghọọ laptọọpụ.
Xiaomi na Oppo ga-enwe mmeghe ihu nke iPhone X
Xiaomi na Oppo ga-enwe ihu NJ nke iPhone X. Chọpụta ihe banyere mkpebi nke ụlọ ọrụ abụọ na-enye ha ohere iji teknụzụ a.
Samsung ga - enyere mgbawa redio nke ekwentị ya aka
Samsung ga-eme ka mgbawa redio FM dị na ekwentị ha. Chọpụta karịa maka mkpebi ụlọ ọrụ iji mee ka redio FM chio nwee ike
Nweta Xiaomi Mi 5S Plus naanị $ 271.17 kama $ 399.99 na Banggood
Xiaomu Mi 5S Plus dị na onyinye a na-agaghị anabata nke ruru ego 32% na Banggood. Can nwere ike nweta ya maka naanị $ 271.17 kama $ 399.99 nke mbụ ya price. Anyị na-enye gị nkọwa!
A na-edozi ihe oyiyi nke Nokia 1
Ihe onyonyo izizi nke ga - abụ Nokia 1 ka fụpụgoro, ngwaọrụ dị ala gbadoro anya na mba ndị na - etolite ma nke ahụ na - enye anyị ọdịdị dị ka Nokia 2.
Asus na-ekwupụta ZenFone Max Plus (M1) na CES na Las Vegas, na-abịa United States na February
Asus ZenFone Max Plus (M1) mara ọkwa maka United States na nso nso a na Cosumer Electronics Show nke na-eme na Las Vegas, Nevada. Ngwaọrụ a ga - adị n'ọnwa February nke afọ a na mba a. Anyị ga-agwa gị banyere ya!
Samsung Galaxy A8 (2018) na-aga n'ihu na Netherlands maka euro 449
Samsung Galaxy A8 (2018) rutere na Netherlands mgbe mbupute nke gọọmentị dị na Disemba afọ gara aga. Ngwaọrụ a dị na ọnụahịa nke 449 euro na Netherlands na, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ọnụ, ọ na-eme ka ọ dị ntakịrị na nkọwa ya.
LG G7, nwere ike iji Snapdragon 835 processor karịa Snapdragon 845
Dabere na ozi ọhụụ kachasị agbapụ na weebụsaịtị LG, ọkwa LG na-esote, LG G7, nwere ike ijikwa site na Snapdragon 835, onye nhazi nke dị n'ahịa ihe karịrị otu afọ.
Kwenye: A ga-ewepụta Galaxy S9 na February
Kwenye: A ga-ekpughe Galaxy S9 na February. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke Samsung's high-end.
Vivo ga-eweta mbido ekwentị nwere ihe mmetụta mkpịsị aka ejiri aka na CES taa
Micho echewo echiche na ọnwa ndị na-adịbeghị anya banyere onye ga-abụ onye nrụpụta izizi iji jikọta, ...
BlackBerry malite ekwentị mkpanaaka gam akporo ọhụrụ abụọ na 2018
BlackBerry na-ewepụta ekwentị gam akporo abụọ na 2018. Chọpụtakwuo ihe gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ iji wepụta ekwentị n'afọ a.
Sony, ụlọ ọrụ mba ndị Japan, anọghị azụ na CES na Las Vegas. N'ime ngwaahịa ndị ọhụrụ egosiri na ọgbakọ ọgbakọ omebe iwu a, anyị hụrụ ekweisi anọ ọhụụ.
Nweta Xiaomi Mi 6 maka naanị 303 euro na Lightinthebox
Mgbe oge ekeresimesi gachara, anyi ahughi n’etiti ugwu Jenụwarị, ugwu ndida mee ya obere ...
Samsung ga-amalite n'ichepụta ekwentị ya na-agbanwe agbanwe na November
Samsung ga-amalite n'ichepụta ekwentị na-agbanwe agbanwe na Nọvemba. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ site na iji ekwentị ya na-agbanwe agbanwe.
Alcatel Series 1, 3 na 5: Aldị Alcatel ọhụrụ ahụ gosipụtara na CES 2018
CES 2018: Alcatel na-ewebata usoro 1,3 na 5 ọhụrụ. Chọpụta ihe banyere igwe ọhụrụ sitere na akara French nke ga-abata afọ a.
Blackview X: Ama ọzọ yiri nke iPhone X
Mmetụta nke iPhone X ọhụrụ nwere n'ụwa niile adịla ukwuu nke na ha ewerela ya dịka ihe ndabere maka ịmepụta smartphones ọhụrụ. Lọ ọrụ dị ka Leagoo na Oppo, gaara ama ulo oru yiri nnọọ ngwaọrụ; ma nke Blackview ga-enye gị, na-aga ịhapụ gị akpata oyi wụrụ.
Gam akporo Nougat adịworị nke abụọ kachasị eji mbipute na Oreo adịghị mma
Gam akporo Nougat bụ nke abụọ kachasị eji ụdị gam akporo. Chọpụta data nkesa gam akporo zuru ụwa ọnụ na Jenụwarị.
Leagoo 2018 Carnival na-ewetara anyị ego na ekwentị atọ na GearBest
Leagoo na-ewepụta ebe atọ kachasị ewu ewu na mbelata ego na GearBest. Ndi a bu Leagoo KICAA MIX, T5 na T5C, mobiles ato di na etiti igaghi agha agha.
Oukitel U18, smartphone ohuru sitere na Asia siri ike sitere na ihuenyo iPhone X
Firmlọ ọrụ Asia kwadoro Oukitel U18, smartphone nke sitere na iPhone X na nke ahụ na-enye anyị nkuanya njirimara nke ihe nlereanya a n'elu ihuenyo ahụ.
Nbudata na-eto eto na Playlọ Ahịa Google ma Storelọ Ahịa Ngwa na-enweta uru
Storelọ Ahịa vslọ Ahịa na Applọ Ahịa: Ọnụ ọgụgụ ndị gọọmenti maka 2017. Chọpụta ihe banyere data data nke ngwa ngwa na 2017.
Nweta 6GB RAM MAZE Alpha X na mbelata ego na GearBest
Maze Alpha X nke nwere 6GB RAM na 128GB nke ebe nchekwa di na GearBest na onu ogugu 20%, tinye ya na $ 249.99. Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara mkpọsa a na-agaghị anabata!
Nke a bụ otú smartphones si gbanwee n'oge 2017
Na njedebe nke 2017, anyị na-atụle ngwaahịa banyere mmalite nke ụwa smartphone, ma anyị na-ajụ onwe anyị, n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ezigbo akụkọ ọ bụla?
Ndị a bụ nsụgharị nke Galaxy S9 na S9 + nwere ike iru ahịa
Mgbe anyị matararịrị nkọwa nke Samsung Galaxy S9 na S9 +, anyị ka kwesịrị ịmata ihe nhọrọ RAM na ebe nchekwa ga-adị.
Gam akporo Pay na Google Wallet jikọrọ: Google Pay bu onye amuru
Akwụ ụgwọ gam akporo na Google obere akpa jikọtara ọnụ na Google Pay mụrụ. Choputa ihe banyere ngwa ohuru a amu site na njikọta nke abụọ.
Samsung nzọ na IoT na CES 2018 na Las Vegas
Samsung emeela akara ya na CES 2018 na Las Vegas. O gosila anyị ụfọdụ ngwaọrụ eletrọnị na otu esi esi n'aka IoT onye ọ bụla ga - ejikọ.
Ndị a bụ Sony Xperia gosipụtara taa na CES na Las Vegas
Sony ekpughere Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2 na CES na Las Vegas. Ogwe ndị a dị n'etiti etiti nwere ọtụtụ njirimara na nkọwapụta ndị dị mma mana, n'otu oge ahụ, nwetụrụ mmụọ. Anyị na-agwa gị banyere ha!
Ihe gam akporo Oreo beta maka Huawei P10 biara na Europe
Huawei P10 nke Europe na-enweta beta nke gam akporo Oreo. Chọpụta ihe banyere mbata nke mmelite na ekwentị Huawei.
Google Allo emeela obere mmasị n'etiti ndị ọrụ
Ndị ọrụ enweghị mmasị na Google Allo. Chọpụta ihe banyere enweghị ewu ewu nke ndị ọrụ kwupụta ngwa ngwa ngwa ngwa.
OUKITEL K10 na batrị 11.000 mAh na-enye anyị awa 21 nke vidiyo na-adịghị akwụsị akwụsị
OUKITEL K10 bụ ngwụcha nke na-enye anyị batrị 11.000 mAh, batrị nke anyị nwere ike iji kpọọ vidiyo site na ị nweta nchapụta na ụda kachasị karịa ihe karịrị awa 21.
Ndị a bụ igwe ire ere kachasị ere na 2017
Companylọ ọrụ Korea Samsung egosila na 2017 dum na ọ bụ ezigbo eze nke ahịa na Spain, yana oke ahịa karịrị 25%.
E gosipụtara Nokia 3310 4G nkọwa
Egosiputara nkọwa zuru ezu nke Nokia 3310 4G. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke ngwaọrụ ahụ na-abịa n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Ihe omuma ohuru na Samsung na-egosipụta ngosipụta
Ihe omuma ohuru edeputara nke Samsung augurs na-agbanwe agbanwe nke edoziri ya na teknụzụ nke nrụgide. Ogologo oge ole ka anyị ga-echere iji zute ha?
Moto G4 Play mechara nweta gam akporo 7.1.1 Nougat ọnwa 13 ka e mesịrị
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke igbu oge, onye ọrụ nke Moto GG4 Play ahụla etu ọnụ ya si nweta mmelite gam akporo Naught, mmelite nke gụnyere nchekwa nchedo kwekọrọ na November 2017.
Meizu mBlu S6 (M6S) gafere TENAA ma kpughee ụfọdụ nkọwa ya
Enwere ike ịhụ Meizu mBlu S6 na TENAA, na-egosi ụfọdụ njirimara ya na nkọwa ya nke ndị Xiaomi Redmi 5. Anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ya!
Nokia 6 ga-abata na Spen na gam akporo 8.0 Oreo
Nokia 6 ga-abịa na Android 8.0 Oreo na Spain. Chọpụta karịa maka mmelite dị ugbu a maka ekwentị gị.
HTC mmelite Edge Launcher na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ
Ọ bụ ezie na HTC na-arịọ mgbaghara maka igbu oge na ịmalite Android 8 maka ụdị nkwado ya, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala Edfe Launcher emelitere na atụmatụ ọhụrụ.
A hụrụ Hisense P9 na TENAA na batrị 6000mAh na ihuenyo AMOLED nke anụ ọhịa 5.5-anụ ọhịa.
A na-ahụ smartphone dị egwu, nke Hisense P9, na TENAA, ma anyị nwere nkọwa niile gbasara ekwentị a nke nwere ike ịhụ ìhè na CES na Las Vegas na ụbọchị ndị na-abịanụ. Mara ya!
GFXBench ekpughere ụdịdị TCL 5099
TCL 5099 abanyela na GFXBench n'oge na-adịbeghị anya, ọ na-egosi anyị ihuenyo 5-anụ ọhịa na nkọwapụta ole na ole ndị ọzọ na-aga na njedebe dị ala. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Zute Energizer Ike Max P600S, mkpanaka nwere batrị 4500mAh
Energizer akwadebeala anyị etiti etiti nwere nnukwu batrị 4500mAh, ọ bụ Power Max P600S, ekwentị mkpanaaka nke anyị nwere ike ịhụ na ahịa n'ọnwa a. Anyị na-agwa gị ihe niile banyere ya!
The Doogee V bụ Frankestein si n'ihu nke iPhone X na nchapu nke Galaxy S9
Ihe ọzọ Doogee na-esote, ụdị V, na-enye anyị ihu dị na nke iPhone X, nwere taabụ na elu ihuenyo ahụ wee nwee azụ na mgbapụta nke Galaxy S9.